विदेशबाट फर्केकाले ५ करोड पाउने,यी हुन मापदण्ड !
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउन हाल सञ्चालनमा रहेका २ करोड ५० लाख रुपैयाँका आधा दर्जन भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । विदेशमा काम गरेर कमाएको...
बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुस आजको बजारभाउ !
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । आज तोलामा १ सय रुपैयाले बढेको हो । बिहिवार सुन प्रति तोला ६२ हजारमा कारोबार भएको थियो भने आज शुक्रबार बढेर प्रति...
भारतीय मुद्रामाथी नेपालले लगायो अर्को प्रतिवन्ध
काठमाडौं । नेपाली नागरिकले भारतमा बाहेक अन्य मुलुकमा जाँदा अब भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । त्यस्तै अन्य मुलुकबाट समेत भारतीय मुद्रा नेपाल ल्याउन नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र...
नेपाली वजारमा सुनको भाउ पाँच वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य पाँच वर्षयताकै उच्च भएको छ । बिहिबार सुन तोलाको ६० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । एकै दिन तोलामा ६ सय रुपैयाँ...
सेयर बजार : सामान्य अंकले वृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक सात दशमलव छ बिन्दुले बढेर एक हजार १४८ दशमलव ७८ बिन्दुमा पुगेको छ...
रसुवाका रोशन न्यौपाने बने ३८ वर्षमै सीइओ
काठमाण्डौ । रसुवाका रोशनकुमार न्यौपाने एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका छन् । ३८ वर्षीय न्यौपाने देशका वाणिज्य बैंकहरुका सीइओमध्ये सबैभन्दा कान्छा हुन् । विगत ९ महिनादेखि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा...
नोबेल अस्पताल बन्यो उत्कृष्ट करदाता
काठमाण्डौं । स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा प्रदायक मध्ये मुलुकमै सवैभन्दा बढी आयकर तिरे वापत विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटललाई सम्मान गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा मुलुककै उत्कृष्ट...
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा आज पनि शेयरको मूल्य दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार लगातार ओरालो लाग्दै बजार नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १२.२२ बिन्दुले घटेर एक हजार २१५.१५ बिन्दुमा...
रसुवागढी नाकाबाट भित्राइएको अवैध सुन तीनपिप्लेमा समातियो
काठमाडौं । रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्राइएको पाँच किलो अवैध सुनसहित तिनपिप्लेबाट एकजना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बुधबार काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका २ तिनपिप्लेबाट उक्त अवैध सुनसहित रसुवाका शोेबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । रसुवाबाट...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास भैरहेको छ – अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयातमा निर्भर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्रको रुपमा अघि बढाउने गरी सरकारले विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाएको बताएका छन् । नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोशियसन (नाडा)ले आयोजना गरेको नाडा...